Romafo 8 NA-TWI - Honhom mu ahoɔden - Atemmu nni hɔ ma - Bible Gateway
Romafo 7Romafo 9
Romafo 8 Nkwa Asem (NA-TWI)
8 Atemmu nni hɔ ma wɔn a wɔyɛ Kristo Yesu de. 2 Na honhom mu mmara a ɛma me nkwa na ɛma me ne Kristo yɛ baako no agye me afi bɔne ne owu mmara mu. 3 Nea esiane ɔhonam mmerɛw nti mmara no antumi anyɛ no, Onyankopɔn yɛe. Ɔnam n’ankasa ne Ba a ɔsomaa no wɔ onipa bɔne su so no ba bebuu bɔne atɛn de popaa bɔne. 4 Onyankopɔn yɛɛ eyi sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn a wɔte ase Honhom mu na ɛnyɛ ɔhonam mu no benya mmara no mu nnepa.